ဘုရင်တစ်ပါး၏ချစ်ခြင်းတရားအပိုင်း(၉) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘုရင်တစ်ပါး၏ချစ်ခြင်းတရားအပိုင်း(၉)
Posted by Sonny on Dec 23, 2011 in Creative Writing, Literature/Books | 12 comments
ဘုရင်တစ်ပါး ၏ ချစ်ခြင်းတရား
A few days later Mr. Churchill came to see Edward at Buckingham Palace. At first the King was quiet. Then he said: “This is my last night in England, Winston. I love this country. I wanted to beamodern, kind King. I wanted to change the world, but they stopped me. And now I have to leave.”
ရက်အနည်းငယ်ကြာတော့ ၀င်စတန်ချာချစ်လ် အက်ဒ၀ပ်ကို ဘာမင်ဂမ် နန်းတော် ကိုလာတွေ့ပါတယ်။ ဘုရင်ကြီးကတော့ ပထမတော့ ခပ်အေးအေးပါ။ ပြီတော့မှ အက်ဒ၀ပ်ကပြောလိုက်ပါတယ် “ဒီညကကျုပ်အတွက်တော့ အင်္ဂလန်မှာနောက်ဆုံးညပါ ၀င်စတန် ရေ။ ဒီတိုင်းပြည်ကိုကျုပ်သိပ်ချစ်ပါတယ်။ ကျုပ်ဗျာ ခေတ်လည်းနောက်မကျပဲ အကြင်နာတရားရှိတဲ့ ဘုရင်တပါးဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ကျုပ်ဖြစ်ချင်တာတွေ သူတို့ကတားတယ်ဗျာ။ အခုကျွန်တော် ဒီကနေ ထွက်ခွာသွားရတော့မယ်။
It was ten o’clock. Edward stood up and walked over to the window. In the dark streets below there were hundreds of people. They were singing and calling his name: “Edward, Edward, we love Edward!” they shouted. “Long live the King!” Long live love!”
ည ၁၀ နာရီထိုးနေပြီ။ အက်ဒ၀ပ်က မတ်တပ်ရပ် ပြီး ပြူတင်းပေါက်နားသွားရပ်တယ်။
မှောင်နေတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာတောင် လူတွေရာချီပြီးတွေ့ရတယ်။ သူတို့တွေက သီချင်းတွေဆိုရင်း သူ့နာမည်ကိုခေါ်ရင်းနဲ့ပါပဲ။ သူတို့တွေအော်နေကြပါတယ်။
“အက်ဒ၀ပ်ဘုရင် အက်ဒ၀ပ်ဘုရင် ပြည်သူအားလုံးက အရှင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပါတယ်။ အက်ဒ၀ပ်ဘုရင်သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ။ အက်ဒ၀ပ်ဘုရင် သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေ။ အက်ဒ၀ပ်ဘုရင် မေတ္တာရှေ့ထားပွားများနိုင်ပါစေ။”
Suddenly the King turned to Mr. Churchill. “Why is this happening to me, Winston?” he cried. “What have I done wrong?”
ရုတ်တရက်ပဲ အက်ဒ၀ပ်ဘုရင် က ၀င်စတန်ချာချစ်လ် ဘက်ကိုလှည့်ပြီး.. “ ၀င်စတန်ရေ..ကျုပ်ကိုချည်း ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလည်း..ကျုပ်ဘာတွေများ အမှားတွေလုပ်မိလို့လဲဗျာ..”
He sat down and put his head in his hands. There wasasilence in the room, but through the open window came the shouting from the street. “Long live Edward! Long live love! Long live Edward! Long live love!”
သူထိုင်ချလိုက်ပြီး ခေါင်းကိုလက်နဲ့ဖိထားလိုက်တယ်။ တခန်းလုံးငြိမ်သက်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖွင့်ထားတဲ့တံခါးပေါက်တွေကတဆင့် အသံ တွေကြားနေရပါတယ်။
“အက်ဒ၀ပ်ဘုရင်သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ။ အက်ဒ၀ပ်ဘုရင် သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေ။ အက်ဒ၀ပ်ဘုရင် မေတ္တာရှေ့ထားပွားများနိုင်ပါစေ။”
Mr. Churchill came over and put his hand on the King’s arm. Edward looked up. “Thank you, Winston,” He said, “You wereagood friend to me.”
မစ်စတာ ချာချစ်လ် ဘုရင်အနားတိုးလာပြီး..ဘုရင်ရဲ့လက်မောင်းကိုကိုင်ရင်းအားပေးရှာပါတယ်။ “ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၀င်စတန်။ ခင်ဗျား က ကျုပ်အတွက်တော့
“Thank you, Sir. And you wereagood king.”
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရှင်။ အရှင်ကလည်း မင်းကောင်းမင်းမြတ်ပါ။”
နောက်တစ်နေ့မနက် ၁၀ နာရီလောက်မှာ အက်ဒ၀ပ်အိပ်ခန်းဆီကို တယ်လီဖုန်း ၀င်လာပါတယ်။
“They’re ready for you now, Sir,”avoice said.
အသံတစ်သံက.. “သူတို့ အရှင့်ကိုတွေ့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပါပြီ”
The King walked slowly down the stairs. In front of him there was an open door.
The family were waiting for him. His mother sat near the window, dressed in black.
His brothers stood beside her. “How close they are!” the King thought.
အက်ဒ၀ပ်ဘုရင် လှေခါးကနေဖြေးဖြေးချင်းဆင်းလာပါတယ်။ သူ့ရှေ့တည့်တည့်မှာတော့ တံခါးကဟင်းလင်းပွင့်နေလျက်ပါ။ သူ့မိသားစုကတော့ သူ့ကိုစောင့်နေလျက်ပါ။
သူ့မိခင် ဘုရင်မကြီးကတော့ အနက်ရောင်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ပြီး ပြူတင်းပေါက်နားမှာ ထိုင်နေလျက်ပါ။ သူ့ညီတော်တွေကတော့ သူ့မိခင်ကြီးရဲ့ဘေးနားမှာရပ်လျက်ရှိနေပါတယ်။
“ညီတော်တွေနဲ့ ငါ့မယ်တော်တို့ တော်တော်လေး ချစ်ခင်ကြပါလား”
Onasmall table in the centre of the room there wasapiece of paper. Edward sat down
အစည်းအဝေးခန်းမ အလည်တည့်တည့်မှာ ရှိတဲ့ စားပွဲငယ်လေးရဲ့ အပေါ်မှာ စာရွက်တစ်ရွက်တင်ထားပါတယ်။ အက်ဒ၀ပ် က ထိုင်လိုက်ပြီး စာကို ဖတ်ပါတော့တယ်။
I, Edward, the Eighth, King of Great Britain, King of India, King of Australia, King of New
Zealand, King of Canada, King of Kenya, King of Nigeria, King of Burma, King of Malaya,
King of Singapore, and King of thirty other countries, have today given the crown to
“ဂရိတ်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ ဘုရင်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ဘုရင်၊ သြစတေးလျှ နိုင်ငံ၏ဘုရင်၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ဘုရင်၊ကနေဒါ နိုင်ငံ၏ဘုရင်၊ ကင်ညာ နိုင်ငံ၏ဘုရင်၊ နိုင်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံ၏ဘုရင်၊ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ဘုရင်၊ မလေး နိုင်ငံ၏ဘုရင်၊ စင်္ကာပူ နိုင်ငံ၏ဘုရင်၊အခြားနိုင်ငံပေါင်း(၃၀) ၏ဘုရင်
ဖြစ်သော ကျွနု်ပ် ရှစ်ယောက်မြောက် အက်ဒ၀ပ်ဘုရင် ယနေ့မှ စတင်၍ ကျွန်ုပ်၏ ညီတော် ဂျော့ခ်ျ အား
ဘုရင် သရဖူ အား လွှဲပြောင်း အပ်နှင်း လိုက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။”
ဘုရားသခင်မှ ညီတော်နှင့် သူ၏တုိုင်းသူပြည်သားအားလုံးအား
၁၀ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၁၉၃၆
Edward tookapen and wrote his name at the bottom of the page. Then he stood up
and kissed his brother’s hand.
အက်ဒ၀ပ် က ဖေါင်တိန်ယူပြီး စာရဲ့အောက်ခြေမှာ လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။ တစ်ခါတည်း မတ်တပ်ရပ်ပြီး သူ့ညီတော်ရဲ့လက်ကို နမ်းပြီး ဂုဏ်ပြု လိုက်ပါတယ်။
“I never wanted this to happen,” George said. “This is the worst day of my life.”
ဂျော့ခ်ျ ကပြောပါတယ် “ညီတော် ဒီလိုမျိုးဘယ်သောအခါမှ မဖြစ်စေချင်ခဲ့ပါဘူး။ ညီတော့်ဘ၀အတွက် အဆိုးဆုံးသောနေ့ရက်တွေပါပဲ။”
Edward walked over to his mother, “Before I kiss you,” she said, “there are some things
that I want to say. I have never understood you, child. This morning you wereaKing.
But tonight, you’ll run from England likeathief. Alone. Angry. Afraid.
You think that you’re free. But you’re not. You cannot be free.
“သားတော်ကို မေမေ နှုတ်ဆက်မနမ်းခင် သားတော်ကိုပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်သား..
သားတော်ကိုမေမေ ဘယ်လိုမှနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်.ကလေးရယ်…ဒီမနက်တုန်းမှ သားတော်ကဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..ဒီညမှာ ချက်ချင်းကြီးဆိုသလို
“Everyone needs their family. Everyone needs their home. And tonight you have lost
both those things.”
“လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ မိသားစုဆိုတာရှိရတယ်သားတော်..ဒီလိုပဲ လူတိုင်းမှ “နားခိုရာအိမ်”
ဆိုတာလိုအပ်စမြဲပါ။ ဒီညတော့သားတော်ဟာ ဒီအလိုအပ်ဆုံးသော အရာတွေကိုမှ
“I love you. I am your mother and nothing can change that. But if you marry that
woman, you will break my heart. Go now. It is all very sad.”
“သားတော်ကို မေမေ ချစ်လိုက်တာသားရယ်။ မေမေက သားရဲ့ မေမေပါပဲ။ ဘယ်အရာကမှ သားတော်ကိုချစ်တဲ့မေမေ့ရဲ့ဒီချစ်မေတ္တာတွေကို မပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး။
အက်ဒ၀ပ်က ဘုရင်မကြီးမေရီ ရဲ့လက်ကိုနှုတ်ဆက်နမ်းပြီး လှဲ့ထွက်သွားပါတော့တယ်။
The next day Edward returned to Windsor Castle. He went intoasmall, cold room
at the top of the building. From here, he spoke to BBC radio to Britain and the world.
နောက်တစ်နေ့ မနက်ခင်းမှာတော့…အက်ဒ၀ပ်က ၀င်ဆာရဲတိုက်ကြီးကိုပြန်လာပြီး ရဲတိုက်ကြီးရဲ့ ပေါ်ဆုံးအထပ်က အေးစက်လှတဲ့အခန်းငယ်လေးထဲကနေပြီး ဘီဘီစီ ရေဒီယိုကနေတဆင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံးကို ရော ကမ္ဘာကိုပါ အသိပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
“Tonight, for the first time, I can sayafew words to you. Earlier today I gave the crown
to my brother George. He is now your King. I will soon leave this country and travel to
France. My heart is with Wallis and I cannot live without the woman I love.
I don’t know what will happen to me. Perhaps I will never see England again.
But think of me tonight when I sail across the sea.
God be with you. Long Live King George!”
“ယနေ့ညနောက်ဆုံးနေနဲ့ရော..ပထမဆုံးစကားအနေနဲ့ရော..ကျွန်ုပ်ရင်ထဲက အရှင်းဆုံးနဲ့အတိုတောင်းဆုံးစကားတွေပြောပါရစေ။ ယနေ့နံနက်စောစောပိုင်းကပဲ..
ကျွန်ုပ်ရဲ့ညီတော်ဂျော့ခ်ျ် ကို အာဏာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခုဆိုရင် ညီတော်ဟာ
ပြည်သူပြည်သားအားလုံး ရဲ့ ဘုရင် ဖြစ်သွားပါပြီ။
မကြာမီ ဆိုရင် ကျွန်ုပ် ဒီတိုင်းပြည်ကနေထွက်ခွာသွားပြီး..ပြစ်သစ်ပြည်ကိုခရီးထွက်ခွာပါ့မယ်။
ကျွန်ုပ်ရဲ့နှစ်လုံးသားက ဝေါလစ် ဆီမှာပါ။ ကျွန်ုပ်ချစ်သော ဒီအမျိုးသမီးမရှိရင်
ဘုရင်ကြီးဂျောခ်ျ် သက်ကျော်ရာကျော်ရှည်ပါစေသောဝ်.. ”
Edward left Windsor Castle and got intoalarge black car. It was now midnight
and it was just beginning to rain.
အက်ဒ၀ပ် က ၀င်ဆာရဲတိုက်ကြီးကထွက်ခွာသွားပြီးအနက်ရောင်ကားကြီးပေါ်စီးပြီး
“Take me away as quickly as you can,” he said. The car moved off into the darkness
ကားဆရာကို… “ကျွန်ုပ်ကို မြန်မြန်မောင်းပို့ပေးပါ။”
အမှောင်ညမှာ..အနက်ရောင်ကားလေးတိုးဝင် အသွား မိုးတွေကသည်းပါ့။
“Whatanight!” said the driver? “I think the sky is crying, Sir.”
ကားဆရာ စကားစမြည်ပြောပါတယ်.. “လွမ်းစရာကြေကွဲစရာကောင်းလိုက်တဲ့ညပါ..ကျွန်တော်မျိုးအထင်တော့ ကောင်းကင်ကြီးပါ
At 1:30 a.m. they arrived at Portsmouth. Edward got out of the car andavoice said:
မနက်ခင်း ၁ နာရီ မှာ ပို့စ်မောက် ဆိပ်ကမ်းကိုရောက်ပါတယ်။ အက်ဒ၀ပ်ကကားပေါ်ကအဆင်းမှာ အသံတစ်သံကြားရပါတယ်။
Edward stopped and looked out across the open sea. There wasathin, cold smile
on his face. “King?” he said. “No, I’m not the King. I am justaman in love.”
အက်ဒ၀ပ် ဟိုးအဝေးက ပင်လယ်ပြင် ကြီးကို ငေးကြည့်ရင်း…သူ့မျက်နှာပေါ်မှာလည်း အေးစက်စက် အပြုံးနဲ့ ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။ “ဘုရင် ကြီး..ဟုတ်လား”
“ငါ ဘုရင်မဟုတ်တော့ဘူးကွ…ငါ သာမန် အချစ်နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့
ပြီး….သူလှည့်ထွက်သွားပြီး…သဘောင်္ပေါ်တက်…ဟိုးအဝေးက အမှောင်ညတွေထဲမှာ စီးမျောရင်း……စီးမျောရင်း……………..
မဖတ်ရသေးပဲ ကွန်းမန့် ၀င်ပေးတာပါဗျာ။
ကိုဆန်နီ ဟိုတစ်နေ့က ရေးတဲ့
အမေ ကျွန်တော် သေရင်ဆိုတာလေး ဖတ်ပြီး
ကိုဆန်နီ ကို စိတ်ပူပါသတဲ့။
ကြားထဲက ဆရာမကြီး အတွက်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ဘုရင် ဆိုတာက စိတ်ဝင်စားစရာပဲနော်။
ဟုတ်ပါရဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက သူတို့လက်အောက်မှာကိုး။
(ကျွန်ုပ်ရဲ့နှစ်လုံးသားက ဝေါလစ် ဆီမှာပါ။ ကျွန်ုပ်ချစ်သော ဒီအမျိုးသမီးမရှိရင်
ဆိုတာက ဂန္တ၀င်မြောက်သွားစေတယ်လို့ ထင်မိတယ်။
(မိဘ မောင်နှမတွေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ဘက်က ကြည့်ရင်တော့ တော်တော် အကြင်နာမဲ့တာပဲလို့တောင် တွေးမိတယ်။)
အချစ်ငှက်ရဲ့ သိုက်တစ်ခု သို့ ပေါ့ဗျာ ( မျိုးကြီး သီချင်းစာသားထဲကလို )
ဘုရင် အက်ဒဝပ် ဟာ လှိုင်းကြမ်းတွေထဲ ကူးခတ်သွားတာပေါ့နော်…
အချစ်က အဲ့သည့်လောက်တောင် အားကြီးတယ်လား…….
ဒါဆိုရင် ချားလ်မင်းသားက သူ့အဘိုးဦးကြီးနဲ့ တူတာထင်တယ်……
“လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ မိသားစုဆိုတာရှိရတယ်သားတော်..ဒီလိုပဲ လူတိုင်းမှာ “နားခိုရာအိမ်”
ကျွန်တော်လည်း တကယ်အစစ်ခံစားရေးလိုက်တာပါ။ အကို့madam ကိုပြောပေးပါ။စိတ်ပူပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့။
ရန်ကုန်လာဖြစ်တဲ့အခါ(မသေသေးလို့) ကိုပေါက်ဖေါ်တို့ကို လက်ဆောင်လေးတစ်ခုခုလောက်ဝင်ပေးပါရစေလို့။
အင်း..အမေတော့ အဲဒီ ကဗျာ ကို ဆက်ကိုမဆွေးနွေးတော့တာ။ ပရုပ်ဆီလူးယူရတယ်။ အငိုတော့တိတ်သွားလေရဲ့။ ချစ်ခြင်းအားဖြင့်…ကိုဆန်နီ…..
လိုတာအကုန်ယူပါ။ ပေးချင်လို့ ရေးတာပါ။ ကျွန်တော်ရေးတာ စာလုံးပေါင်းတွေတော့မှားမယ်ထင်တယ်။
လွန်ဆွဲပွဲတစ်ခု ကို ရင်ခုန်စွာကြည့်နေ ရသလိုပါပဲ။
“Love can move mountains” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားလိုထင်ပါရဲ့။
မျိုးကြီးရဲ့ အဆိပ်ခွက်နဲ့လဲဆင်တယ်ကွ…’ဒဏ်ရာတွေများနဲ့..စိမ့်ဝင်ကာစီးတဲ့ လှိုင်းလေထဲကူးခတ်နေရင်း..
အချစ်တွေမွှန်နေကြတဲ့အခါ အကြည်ဓါတ်တွေကိုမမြင်တတ်ကြတာ သဘာဝ ပါလေ။
:Love sees no boundary လို့တော့ကြားဘူးတာပဲ။ ဟုတ်ရဲ့လားတော့မသိပါ။
ဘုရင်မကြီးလည်းသူချစ်တဲ့သူပဲ အိမ်ထောင်ပြုခဲ့တာထင်ပါရဲ့။ သူ့သားတော်မှာလည်းခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတာပဲနော…နော..နော..
“ရန်ကုန်လာဖြစ်တဲ့အခါ(မသေသေးလို့) ကိုပေါက်ဖေါ်တို့ကို လက်ဆောင်လေးတစ်ခုခုလောက်ဝင်ပေးပါရစေလို့။”
ဤသို့ မန်းထားကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် မောင်ဆန်နီသည် ကိုဘလက်ချောနှင့် ကိုပေါက်ဖော်တို့ကို တစ်ရပ်ကွက်တည်း တစ်ရုံးတည်းနေသည်ဟုထင်ပုံရသည်။
သို့မဟုတ် ကိုဘလက်ချော တို့ကို ဟုရေးရာတွင် လက်ချော်သွားပုံပေါ်သည်။
၅၂၈ မက တဲ့ မိခင်မေတ္တာ ကို လည်း လက်ခံပါ
၂၀၂၈ ရှိတဲ့ အပျိုကညာ ရဲ့ ချစ်ခြင်း ကို လည်း သိမ်းပိုက်ပါလေ….